I-Xiaomi Redmi Note 9s manje isemthethweni: intengo nokucaciswa | Izindaba zamagajethi
Isikhathi esingaphezu kwenyanga esedlule, uXiaomi wethule ngokusemthethweni ifayela le- Xiaomi Mi 10, ukubheja komdondoshiya wase-Asia wezinga eliphezulu futhi obe nenkinga enkulu ngentengo uma sikuqhathanisa nesizukulwane esedlule, futhi lokho ukuthi i-chip ye-5G, idale ukwanda kwezindleko zawo wonke amatheminali asewusebenzisile, njengoba kwenzeka futhi nge I-Realme X50 Pro 5G.
Manje sekuyithuba le- Redmi Inothi 9s, enye yezindawo ezidume kakhulu zenkampani futhi ekwazile ukudweba ngayo i-niche ebalulekile maphakathi nebanga. Ama-Redmi Note 9s amasha angena emakethe ukugcwalisa iRedmi Note 9 Pro ne-Note 9 Pro Max ezethulwe ezinsukwini ezedlule.
1 Ngabe i-Xiaomi Redmi Note 9s isinikeza ini?
2 Ukucaciswa kweRedmi Note 9s
2.1 Isikrini seXiaomi Redmi Note 9s
2.2 Amandla weXiaomi Redmi Note 9s
2.3 I-Xiaomi Redmi Qaphela ibhethri le-9s
2.4 I-Xiaomi Redmi Qaphela amakhamera we-9s
3 Intengo nokutholakala kwamaRedmi Note 9s
Ngabe i-Xiaomi Redmi Note 9s isinikeza ini?
Okusha okuyinhloko esikuthola kule modeli kuqhathaniswa nesizukulwane esedlule kungosayizi wesikrini, isikrini esisinikeza usayizi omkhulu. Enye yamandla yale modeli entsha itholakala ku- usayizi omkhulu webhethri Futhi ngemuva, emuva lapho sithola khona Amakhamera ama-4. Ngokuqondene nenkumbulo, lokhu futhi kukhuphuke kwafika ku-6 GB, 2 ngaphezulu kwesizukulwane esedlule.
Ukucaciswa kweRedmi Note 9s
Isikrini I-6.67-intshi IPS LCD enezinga lokuqabula elingu-60 Hz - 20: 9 factor ratio - 2.400 × 1.080 resolution
Memoria 4/6 GB RAM
Isitoreji Isikhala esandisekayo esingu-64/128 GB sifinyelela ku-512 GB ngamakhadi we-MicroSD
Amakhamera angemuva 40 mpx main - 5 mpx macro - 119 mpx angle ebanzi (8º) - 2 mpx inzwa yokujula
Ibhetri I-5.020 mAh iyahambisana nokushaja okusheshayo okungu-18w
Ukuphepha Inzwa yeminwe ohlangothini
Conectividad I-Wi-Fi 5 - i-Bluetooth 5.0 - i-USB-C - ihedfoni yekhanda
Isisindo I-209 amagremu
Isikrini seXiaomi Redmi Note 9s
Isikrini seRedmi Note 9s sifinyelela kuma-intshi we-6,67 futhi sisinikeza umgodi omncane engxenyeni engenhla emaphakathi, lapho kutholakala khona ikhamera yama-selfies. Isilinganiso sesikrini siba ngu-20: 9, ifomethi ende kune- ivumela imininingwane engaphezulu ukuthi iboniswe esikrinini.
Isikrini sivikelwe ubuchwepheshe be-Gorilla Glass 5 futhi sisinikeza ukukhanya okuphezulu kwama-nits we-450. Inzwa yezigxivizo zeminwe itholakala ohlangothini lwedivayisi, yakhelwe kunkinobho yokuvula nokucisha isikrini.
Amandla weXiaomi Redmi Note 9s
Iprosesa esebenzisa iRedmi Note 9s yi-Snapdragon 720G, iprosesa eyenziwe yiQualcomm kuma-nanometer ayi-8 evelele ukusebenza kahle kwamandla nokusabalalisa ukushisa okuphezulu. Uma futhi sifaka ibhethri elingaphezu kuka-5.000 mAh, singaba ne-smartphone izinsuku ezimbalwa buthule.
Le modeli izotholakala nge- izinguqulo ezimbili: 4 GB we-RAM / 64 GB wesitoreji kanye no-6 GB we-RAM / 128 GB wesitoreji (UFS 2.1). Zombili lezi zinhlobo zingakhulisa amandla azo okugcina ngokusebenzisa amakhadi we-MicroSD,
I-Xiaomi Redmi Qaphela ibhethri le-9s
Impilo yebhethri imvamisa inkinga enkulu kubasebenzisi abaningi, futhi abaningi bayisebenzisela ukwenza noma yiluphi uhlobo lomsebenzi, njengokuxhumana namanethiwekhi omphakathi, besebenzisa uhlelo lokusebenza lwebhange, ukufunda ama-imeyili, ukwenza imisebenzi yokuphatha
Ngaphezulu kwe-5.000 mAh esebenzisa iXiaomi kumaRedmi 9s, singaqiniseka ngokuphelele ukuthi impilo yebhethri ngeke kube yinkinga, ngisho nakubasebenzisi abakhulu kakhulu.
I-Xiaomi Redmi Qaphela amakhamera we-9s
Isigaba sezithombe se-Xiaomi Redmi 9s singesinye sezivelele zalesi siginali, nalapho sithola khona ngisho Amakhamera ama-4:
I-Main 48 mpx yakhiwe ngamalensi ayi-6 - i-angle yokubuka ama-degree ayi-79 - ukuvula f / 1.79
I-8 mpx engela ebanzi ebanzi ene-119 degree angle yokubuka nokuvulwa kwe-f / 2.2
5 mpx macro nge f / 2.4 ukuvula (ekahle ezintweni eziphakathi kuka 2 no 10 cm ukusuka kwikhamera)
Inzwa yokujula eyi-2 mpx enefert 2.4
AmaRedmi Note 9s asivumela ukuthi siqophe amavidiyo kuzinqumo ezilandelayo kanye nenombolo yozimele:
720p I-30 fps
Ukuhamba kancane kwe-1080p I-120 fps
Ukuhamba kancane kwe-720p I-120 fps / 240 fps / 960 fps
Intengo nokutholakala kwamaRedmi Note 9s
Esethulweni kuphela intengo emenyezelwe ngamadola, hhayi ngama-euro, ngakho-ke singenza nje ukuqagela ngokuthi intengo yayo yokugcina eYurophu izoba yini. AmaRedmi Note 9s azotholakala ngezinhlobo ezimbili, njengoba ubonile kuthebula lezincazelo.
I-Redmi Note 9s ene-4 GB ye-RAM ne-64 GB yesitoreji: $ 199. Ngokwesilinganiso sokushintshana sanamuhla (23-3-2020) isilinganiso sokushintshaniswa ngama-euro simi kuma-euro angama-185. Kungenzeka, intengo yokugcina izobe iseduze I-229 euro.
I-Redmi Note 9s ene-6 GB ye-RAM ne-128 GB yesitoreji: $ 239. Ngokwesilinganiso sokushintshana sanamuhla (23-3-2020) inani lokushintshaniswa ngama-euro limi kuma-euro angama-223. Intengo eSpain izoba khona I-269 euro.
AmaRedmi Note 9s azotholakala ngemibala emi-3: I-Interstellar Grey, i-Aurora Blue noGalcier White.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » I-Xiaomi Redmi Note 9s manje isemthethweni: intengo nokucaciswa
Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwamageyimu ku-Android